घरेलु हिंसाको डरलाग्दो शृंखला
घरेलु हिंसाको डरलाग्दो शृंखला ९ महिनामा काठमाडाैंमा मात्र १११ हिंसा
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, १ जेठ
तीन महिनाअघि १७ फागुनमा काठमाडौंको भीमसेनस्थानबाट एक महिला पक्राउ परिन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा आफूलाई ‘माता’ भन्ने कविता श्रेष्ठ थिइन् ।
दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका–४ की रश्मि उपरकोटीलाई ‘बोक्सी होस्’ भन्दै कुटपिट गरेको र यातना दिएको आरोप कवितामाथि लागेको थियो । प्रहरीका अनुसार रश्मि तीन महिनाको बच्चालाई सन्चो नभएपछि भीमसेनस्थानमा रहेको माताको आश्रम पुगेकी थिइन् ।
माताले बच्चाको आमालाई नै बोक्सी भएको भन्दै पन्यु तताएर शरीरका विभिन्न भागमा डामेकी थिइन् । बच्चा उपचार गराउन पुगेकी उनलाई ‘माता’ले उल्टै घाइते बनाएपछि न्याय माग्दै प्रहरीकहाँ पुगिन् । उनकै उजुरीका आधारमा कवितालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
यस्तै, केही महिनाअघि असनका शान्ता श्रेष्ठले जँड्याहा श्रीमान्ले ८ वर्षदेखि कुटपिट गरिरहेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी हालिन् ।
२०६६ सालमा विवाह गरेर घर आएदेखि दिनहुँजसो श्रीमान्को कुटाइ सहनुपरेको उनको गुनासो थियो । श्रीमान् नसुध्रिएपछि उनी कानुनी उपचार खोज्न प्रहरीकहाँ पुगेकी थिइन् ।
भक्तपुरमा यही साता घरेलु हिंसाका दुई उजुरी परेका छन् । रीता (नाम परिवर्तन)ले श्रीमान्ले परस्त्रीसँग हिमचिम बढाएको र बेलुका मदिरा सेवन गरेर घरमा आएर कुटपिट गर्ने गरेको भन्दै उजुरी दिएको भक्तपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हिमालय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै, अर्की एक महिलाले पनि श्रीमान्बाट दिनहुँ पिटाइ खानुपरेको भन्दै उजुरी दिएकी छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ९ महिनामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १११ वटा घरेलु हिंसाको उजुरी परेका छन् । देशभर भने चालू आवमा ६ सय ४७ उजुरी परे ।
घरेलु हिंसाको प्रमुख कारण श्रीमान् र श्रीमतीबीचको अविश्वास रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेलको भनाइ छ ।
‘घरेलु हिंसाको पहिलो कारण श्रीमान्–श्रीमतीबीच विश्वासको कमी हुनु नै हो । त्यसको असर परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि परेको हुन्छ । मदिरा पनि अर्को कारण हो,’ पोखरेलले भने ।
घरेलु हिंसाकै कारण कतिपय श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेददेखि हत्याका घटनासमेत हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
अधिकांश घटना प्रहरीमै मिलापत्र
घरेलु हिंसाबारे आएको अधिकांश उजुरी प्रहरी कार्यालयमै मिल्ने गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार श्रीमान् श्रीमतीको सामान्य घटनाका उजुरीमा प्रहरीले दुवै जनालाई कार्यालयमै बोलाएर छलफल गराउने गरेको छ ।
घरेलु हिंसाबारे प्रहरीको कालिमाटीस्थित महिला सेलले हेर्ने गरेको छ । सबै घरेलु हिंसाबारे कालीमाटीले नै हेर्ने र सामान्य विषय छ भने त्यही बोलाएर छलफल गराउने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
गम्भीर र मिल्न नसक्ने उजुरीमा भने प्रहरीले अदालत जान सुझाउने गरेको छ । घरेलु हिंसाका सामान्य उजुरी आउने हुँदा अधिकांश उजुरी अदालत नजाने प्रहरीको भनाइ छ ।
के हो घरेलु हिंसा ? कसरी गर्ने उजुरी ?
कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।
सोझै अदालतमा पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरीको सहयोगमा त्यसको व्यवस्था मिलाउने प्रवधानसमेत कानुनले सुरक्षित गरेको छ ।
घरेलु हिंसाबारे पीडितले चाहेमा ३० दिनभित्र मिलापत्र गराइदिनुपर्ने व्यवस्था घरेलु हिंसा नियमावलीमा समावेश छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा वा पीडक उपस्थित नभएमा वा गराउन नसकिएमा सबै कागजपत्र सामेल गरी १५ दिनभित्र अदालतसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतले कसुरबमोजिमको सजाय सुनाउने गर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २, २०७६, ०४:२८:००
ई-सेवाबाट अवैध सट्टेबाजीको रकम ट्रान्सफर, प्रहरीले थाल्याे अनुसन्धान